Learn English - Nepali Language services
English to Nepali Document Translation
Home » Learn English
Learn English with me (मसँग अंग्रेजी सिक्नुहोस्)
साथीहरूको अनुरोधमा म यो ब्लग थाल्दैछु । यो मुलत: अंग्रेजी भाषा सिक्ने र सिकाउने कुरामा केन्द्रित हुनेछ । म क्रमबद्ध रूपमा अंग्रेजी भाषाका विभिन्न पक्षमा प्रकाश पार्नेछु ।
मलाई लाग्छ भाषा सिक्दा निम्न कुरामा ध्यान दिन सकियो भने र ति कुराहरूको पालना गर्न सकियो भने हामी सफलता हासिल गर्न सक्छौं ।
Words (शब्दहरू) कुनै पनि भाषाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुराहरू हुन् । शब्दहरूलाई विशेष रूपले चार भागमा बाँड्न सकिन्छ; नाम (Noun), क्रिया (verb), विशेषण (adjective), क्रियाविशेषण (Adverb). अत: हाम्रो प्राथमिक ध्यान शब्दहरू जान्नुमा केन्द्रित हुनु पर्छ । म दिनको कम्तीमा पाँच वटा शब्दहरू लेखेर, जानेर भाषाको अध्ययन गर्ने सुरु गर्ने सल्लाह दिन्छु । यसरी शब्दको छनौट गर्दा दुईवटा क्रिया, एक-एक वटा नाम, विशेषण, क्रियाविशेषणबाट शुरू गर्दा राम्रो हुन्छ । शब्दहरू खोज्न शब्दकोषको प्रयोग गर्नुहोस् ।
मलाई लाग्दैन आफ्नो मातृभाषालाई हेला गरेर हामी अर्को भाषा सिक्न सक्छौं । मेरो बिचारमा हामीले आफूले मातृ भाषामा भन्न चाहेका कुरालाई अंग्रेजीमा व्यक्त गरेर अंग्रेजी सिक्न सक्छौं । उदाहरणको लागि, हामीलाई ‘बिना कारण गाली खानु परेको छ’ भन्नु छ- हामी भन्छौं- I have had to be scolded for no reason. (Subject+ have had to+ verb1….). अब हामी ‘अचेल बिहान सबेरै उठ्नु परेको छ (I have had to get up early in the morning nowadays)’ नेपालले चीनबाट आसा गर्नु परेको छ (Nepal has had to hope from China) भन्न सक्छौं ।
अर्को तिर, हामी यही संरचनामा बनेको अंग्रेजी वाक्यको नेपाली अर्थ के हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन पनि सक्षम हुन्छौं । She has had to pretend to smile. (उनले हाँसे जस्तो गर्नु परेको छ ।)
हामीले अंग्रेजी सिकाइलाई कम्तीमा प्रतिदिन दुई घण्टे कटिबद्ध (dedicated) समय दिनु पर्छ । हामीले आफूले देखेका कुराहरूलाई अंग्रेजीमा भन्ने प्रयास गर्नु पर्छ । हामी चरो आकासमा उडिरहेको देख्छौं (The bird is flying up in the sky.) अथवा श्रीमतीले कचकच गरेकाले वाक्क हुन्छौं (I am fed up with my wife fussing about.)
भन्न खोजेको कुरा के हो भने हामी आफ्ना हरेक बिचारलाई अंग्रेजीकरण गर्न सक्छौं र गर्ने अभ्यास गर्नु पर्छ । यही अभ्यासले नै हामीलाई प्रखर अंग्रेजी लेखत तथा वक्ता बनाउँछ ।
हामीले सिकारुको रूपमा कुनै कुरालाई कसरी अंग्रेजीमा भन्न सक्छौं, सो कुरालाई अर्को तरिकाले भन्न सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने कुरा प्रयासरत हुनु पर्छ ।
यो ब्लगहरू कसका लागि हो ?
अंग्रेजी सिक्न चाहने जो सुकैका लागि । तर पनि यसले विद्यार्थीहरू, IELTS, TOEFL जस्ता परीक्षाको तयारी गरिरहेका, अनुवाद अध्ययनमा उत्सुक सबै जनालाई सहयोग गर्नेछ ।
अहिले सम्मका सबै पाठको सूचीको लागि निम्न लिङ्कमा जानुहोस्
मलाई सामाजिक सञ्जालमा फलो गर्नुहोस्:
by @Nepali Linguist
Learn English with Me: Have
Learn English with Me: Command (आदेश)
नैतिक शिक्षा – लिन्डा पाष्टन
The sun also rose